Dawladda Turkiga Oo Gaadiid Aan Xabaddu Karin Ugu Deeqday Ciidamada Asluubta Xamar | Berberatoday.com
Dawladda Turkiga Oo Gaadiid Aan Xabaddu Karin Ugu Deeqday Ciidamada Asluubta Xamar
October 23, 2016 - Written by Berbera Today
Moqdisho(Berberatoday.com)-Dowladda Turkiga ayaa basas nooca aan rasaasta karin ugu deeqday taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed, waxaana kala wareegaydeeqdaasi safiirka Soomaaliya u fadhiya Turkiga Amb Cabdullaahi Maxamed Cali (Sambaloolshe), oo ay wehliyeen howlwadeenno safaaradda ka tirsan.
Basaska oo tiradooda ay tahay Labo ayaa loogu talo galay in loogu adeego Maxaabiista Xabisyadda dalka ku xidhan ,waxaana Safaaradda Soomaaliya ee Turkiga ay soo saartay Markab iyadoo dalka ay soo gaadhi doonaan Dhawaan.
Safiirka Dowladda Soomaaliya u fadhiya Turkiga Danjire Cabdullaahi Maxamed Cali (Sambaloolshe),ayaa Dowladda Turkiga uga mahadceliyey Taageerada ay siinayaan Ciidamadda qaranka, isagoo timaamay in basaskan Caalamiga ah ee Turkiga ay ugu deeqeen Ciidanka Asluubta uu waxbadan ka badali doonno howlaha Hormarineed ee Ciidankaasi kawadaan Xabsiyada dalka ,iyadoo uu xusay Safiirka in Iminka Horumar aad u balaadhan laga dareemayo Xabsiga dhexe ee Xamar.
Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed S/guud Bashiir Maxamed Jaamac,ayaa sheegay in Basaska aan xabadi Karin ay u qorsheeyeen markii ay si toos ah Taliska uu ula wareego in lagu qaado Maxaabiista Xiliga la geynayo Maxkamadaha ,waxaana uu Dowladda Turkiga uu uga mahad celiyey Taageerada ay la garab taaganyihiin Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed.
Dowladda Turkiga ayaa waxa ay kamid tahay wadamada sida gaar ah u caawiyo Saamaaliya iyadoo ay xusid Mudantahay in dhawaan Ciidanka Asluubta Soomaaliyed ay ku wareejiyeen Dhar iyo Qalabka Ciidanka oo ay ugu talo galeen in Ciidanka lagu Hormariyo.